Caruur Ku Geeriyootey Duqeyn Ka Dhacday Yemen – Bandhiga
Caruur Ku Geeriyootey Duqeyn Ka Dhacday Yemen
SANCA (Bandhiga) – Ku dhowaad soddon qof oo carruur iyo dumar u badan ayaa ku geeriyoodey duqeyn ka dhacday galbeedka dalka Yemen, taasoo ay fulisey mid kamid ah diyaaradaha isbahaysiga Sucudigu hoggaamiyo ee dagaalka kula jira mileeshiyaadka Xuuthiyiinta.
Duqeynta oo lala beegsaday kaam dad barakacaayl ahi ku nool yihiin oo lagu magacaabo Ad-dirhami, kaasoo qiyaastii 22km ka durugsan magaalo madaxda gobolka Xudeyda, waxaa ku geeriyoodey 22 caruur ah iyo haween tiradoodu gaareyso afar.
Dhacdadan ayaa imaanaysa labo todobaad kaddib markii duqeyn isla gobolka Xudeyda ka dhacday ay ku geeriyoodeen in ka badan 50 qof oo badankoodu ahaa wiilal ardey ah oo dhiganayey dugsiga hoose, ku dhowaad 70 kalena ku dhaawacmeen.
Xaaladda Yemen ayaa kasii dareysey tan iyo sanadkii 2015, markaas oo mileeshiyaadka shiicada ee Xuuthiyiintu la wareegeen gacan ku haynta badi gobollada dalkaas, kuna khasbeen madaxweyne Cabdul Raabi Mansuur in uu dalka dibaddiisa u baxsado.
Qaramada Midoobey ayaa shaacisey in ku dhowaad 10,000 oo qof ku dhinteen dagaalka Yemen, halka 55,000 oo kalena ku dhaawacmeen, sidoo kale colaadda dalkaas ka aloosan ayaa sabab u noqotey in 22 milyan oo Yemeniyiin ah ay lasoo deristo xaalad macaluul ah oo daran.